I-IATA: Ukuba semthethweni kwezinyanga eziyi-12 zesitifiketi se-EU COVID kuzovikela ukutakula kwezokuvakasha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha zaseYurophu » I-IATA: Ukuba semthethweni kwezinyanga eziyi-12 zesitifiketi se-EU COVID kuzovikela ukutakula kwezokuvakasha
Airlines • Airport • Izindaba Zezinhlangano • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
The Inhlangano Yezindiza Yezindiza Yomhlaba Wonke (IATA) ucele ukuqapha lapho ephendula iSincomo Sekhomishini YaseYurophu sokuthi i-EU Digital COVID Certificate (DCC) kufanele ihlale isebenza kuze kube yizinyanga eziyisishiyagalolunye ngemuva komthamo wesibili wokugoma, ngaphandle uma kusetshenziswa i-booster jab.
“I-EU DCC iyimpumelelo enkulu ekuqhubeni indlela efanayo yezwekazi lonke yokulawula inkinga yezempilo ye-COVID-19 kanye nokwenza lula inkululeko yabantu ukuthi baphinde bahambe. Isekela ukusimama okuntekenteke emkhakheni wezokuvakasha kanye nezokuvakasha. Futhi kubalulekile ukuthi noma yiziphi izinguquko kuyo zibe nendlela yokuhlanganisa ebona umthelela wezinqubomgomo ezihlukene zamazwe angamalungu futhi ikhuthaze ukuhambisana okuqhubekayo kuwo wonke amazwe. Europe,” kusho uRafael Schvartzman, IATA's Regional Vice President for Europe.
Udaba olubalulekile ukufaneleka komgomo kanye nemfuneko yamashothi akhuthazayo. Njengoba ukuzivikela okutholakala ngokugoma kuncipha, ama-booster jabs aya ngokuya enikezwa ukuze andise futhi aqinise impendulo yabantu yokuzivikela. Kodwa-ke, uma ama-booster shots egunyazwa ukuze kugcinwe ukusebenza kwe-DCC, kubalulekile ukuthi izifunda zivumelanise indlela yazo nobude besikhathi obuvunyelwe phakathi kwephuzu lokugoma okugcwele kanye nokunikeza umthamo owengeziwe. Izinyanga eziyisishiyagalolunye eziphakanyiswe yiKhomishana zingase zinganele. Kungaba ngcono ukubambezeleka le mfuneko kuze kube yilapho zonke izifundazwe zinikeza ama-booster jabs kuzo zonke izakhamizi, kanye nokuba semthethweni kwezinyanga eziyishumi nambili ukuze kunikezwe isikhathi esengeziwe sokuthi abantu bathole umthamo we-booster, kucatshangelwa izindlela ezihlukene zokugoma zikazwelonke ezithathwayo.
“Isiphakamiso sokulawula imikhawulo ekubeni semthethweni kwe-DCC sidala izinkinga eziningi ezingaba khona. Abantu abathole umuthi wokugoma ngaphambi kukaMashi, okuhlanganisa nabasebenzi bezempilo abaningi, bazodinga ukuthi sebethole i-booster ngomhlaka-11 Januwari noma bangakwazi ukuhamba. Intando EU izifundazwe ziyavumelana ngesikhathi esimisiwe? Isidingo sizovunyelaniswa kanjani nezifundazwe eziningi ezithuthukise amaphasi e-COVID aqashelwa ngokuphindaphindiwe yi-EU? Ngaphezu kwalokho, i- I-World Health Organization (WHO) uthe ama-booster shots kufanele abekwe eqhulwini emaqenjini asengozini angazange abe nawo umthamo wokuqala, ingasaphathwa eye-booster. Emhlabeni jikelele, uhlelo lokugoma lusenendlela ende okufanele luhambe ezifundazweni eziningi ezisathuthuka futhi kufanele kugxilwe ekuqinisekiseni ukulingana komgomo. Uma kubhekwa ukuthi iningi labahambi ngezindiza abekho emaqenjini asengozini kakhulu, ukuvumela isikhathi esiyizinyanga eziyishumi nambili ngaphambi kokuthi kusetshenziswe isithuthukisi kungaba yindlela esebenza kakhulu kubahambi kanye nendlela elungile yokuthola ukulingana komgomo,” kusho uSchvartzman.
Okunye okukhathazayo yisiphakamiso seKhomishana sokuthi abahambi bagome ngomuntu onga-EU umuthi wokugoma ogunyaziwe kufanele wethule ukuhlolwa kwe-PCR okunegethivu ngaphambi kokuhamba. Lokhu kuzokwenqabela ukuhamba okuvela ezindaweni eziningi zomhlaba lapho amazinga okutheleleka ephansi, kodwa inani labantu ligonywe WHO-imithi yokugoma egunyaziwe engakatholi ukugunyazwa ngokomthetho e-EU.
“Ohulumeni kufanele babeke eqhulwini izinqubomgomo ezilula, ezibikezelwayo nezisebenzayo ukuze baqinisekise ukuthi abagibeli baphinde bathola ukuzethemba ekuhambeni nokuqiniseka kwezinkampani zezindiza zokuvula imizila. I-European Center for Disease Control ikubeka obala embikweni wayo wakamuva wobungozi wokuthi imikhawulo yokuhamba mancane amathuba okuthi ibe nomthelela omkhulu esikhathini noma ukuqina kwezifo eziwumshayabhuqe zasendaweni. Siyabonga ukuthi iziphathimandla kumele zihlale ziqaphile, kodwa ukucwasa imithi yokugoma egunyazwe yi-WHO kuwukumosha izinsiza kanye nesithiyo esingadingekile senkululeko yabantu yokuhamba,” kusho uSchvartzman.